आयनियन सागर र यसका टापु | यात्रा समाचार
आयनियन सागर र यसका टापुहरू
छुट्टी मा मा ग्रीस केही समय मा एउटा मुख्य भूमिबाट टापुहरुमा उफ्रिन्छ, र यस मामला मा छनौट गर्न को लागी धेरै छ। त्यहाँ सुन्दर टापुहरू छन् र ती मध्ये एउटा हो ग्रीस टापुहरू Ioni समुद्र, भूमध्य सागरको पाख जुन पहिले ग्रीस र रोमको बीचमा मुख्य व्यापार मार्ग थियो।
तर यसमा ईतिहासको साथसाथै, यो आज यसको सुन्दर टापुहरू हो जुन उनीहरूको आफ्नै ज्योतिले चम्किन्छ। हामीलाई खोज्नुहोस् जुन हामी भ्रमण गर्न, हेर्न र रमाउन सक्दछौं यहाँ
1 आयनियन सागर
2 आयनियन सागरका टापुहरू
हामीले माथि भनेझैं, योaमानिन्छ भूमध्यसागरको पाख र यो एड्रियाटिक सागरको दक्षिणमा अवस्थित छ। पश्‍चिममा इटाली र दक्षिण अल्बानिया छ, ती टापुहरू जुन आज हामीलाई बोलाउँछ र मुख्य भूमि ग्रीस। आयोनियन सागर, स्ट्रेट मेसेना हुँदै टेरेस्ट्रियल सागर र ओट्रानो माध्यमबाट एड्रियाटिक सागरमा पनि जोडिएको छ।
भूगोलशास्त्रीहरु भन्छन् कि पुरानो समयमा यो समुद्रलाई पोरोसको समुद्र भनिएको थियो, तर योभन्दा पहिले क्रोनस र रियाको समुद्र पनि थियो। उनको नाम को मूल मा रायहरु त्यहाँ धेरै छन्। यदि हामीले यो माथिबाट देख्यौं भने आयनियन सागरको निश्चित त्रिकोण आकार छ र यदि हामी दक्षिणी भागमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं भने, यो हो जहाँ भूमध्यसागरको गहिराइको गहिराइ हो, यहाँसम्म कि एक लामो र ठूलो घाटी पनि छ जुन अफ्रिकी प्लेटको साथको सीमा चिह्न गर्दछ। यहाँबाट भूकम्पहरू क्षेत्रमा।
टापुको स्थिति अनुसार, आयनियन सागर भौगोलिक रूपमा भागहरुमा विभाजित छ जुन उत्तरदेखि दक्षिणमा हिमारा सागर, कोरेफु सागर, पाक्सोस सागर, टिलेभोइस सागर, इचिनाडेस सागर, पत्रस सागर र कीथीराको समुद्री।
आयनियन सागरका टापुहरू
तिनीहरू यस नीलो र निलो समुद्रका मोतीहरू हुन्। यी टापुका नाटकीय भौगोलिक संरचनाहरू र रमणीय वनस्पति र दिव्य समुद्र तटहरू छन्। आयनियन सागरका टापुहरू हुन् कोर्फु, इथाका, केफलोनिया, किथिरा, लेफकाडा, पाक्सोस र जाकिन्थोस। यी गन्तव्यहरू हुन् जुन तपाईंले आयोनियन समुद्रमा पर्यटन विचार गर्दा रोज्नु पर्दछ। तपाईं कुन छनौट गर्नुहुन्छ?
Corfu यो धेरैको लागि एउटा मुख्य टापु हो सबैभन्दा सुन्दर टापु देश बाट। यो धेरै वर्षा हुन्छ त्यसैले यो एक हो हरियो टापु बारी, इटाली, वा भेनिस वा आन्कोनाबाट सजीलो पहुँचयोग्य। त्यसैले यदि तपाईं इटालीबाट ग्रीस जानुभयो भने, यो पक्कै पनि यो तपाईंको मार्गमा पहिलो ग्रीक भूमि हुनेछ। यहाँ तपाईंसँग सबै थोरै चीजहरू छन् किनकी तट परिवर्तन भएको छ सुपर टुरिस्ट इनल्यान्ड तपाईले अझै पिटेको ट्र्याकबाट सुन्दर गाउँहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
पूर्वी तटमा, अल्बेनियाको सामना गर्ने एक, त्यहाँ छन् कॉभ्स र कंकड तटहरू, र पश्चिम तर्फ परिदृश्य अब यति चिल्लो तर तेज छ, चट्टान र खाडी धेरै बढी खुला। यदि तपाईं थोरै मान्छे चाहनुहुन्छ भने सुदूर उत्तरपश्चिममा त्यहाँ तीन निर्जन साना टापुहरू छन् र राम्रा रेती समुद्र तटहरू छन्।
Ithaca प्रसिद्ध छ ओडिसीस टापु। एक हो पहाडी टापु जहाँसुकै रकको धेरै र सुरम्य संग जैतुन क्षेत्रहरू। थुप्रे छ पुरातात्विक खंडहर, माछा मार्ने गाउँ र तटहरू। यससँग धेरै हिड्ने पथहरू छन् र राजधानी, भ्याथी, एक सुन्दर सानो शहर हो। छोटकरीमा, Ithaca छ पैदल यात्रा को लागी आदर्श र यसमा दुबै साना र ठूला समुद्र तटहरू छन्।
केफलोनिया सन् १ 1953 XNUMX in मा यसले ठूलो भूकम्प गयो र त्यसबेलादेखि धेरै स्थानीय मानिसहरूले बस्नको लागि अर्को ठाउँ रोजे, त्यसैले आज यसको जनसंख्यामा धेरै ब्रिटिश, इटालियन र अमेरिकीहरू छन्। एक हो गुफा र भूमिगत तालहरु संग धेरै ठूलो टापु र राम्रो तटहरू। अर्गोस्टोली यसको राजधानी हो, एम्फीथिएटरको आकारको। यहाँ छ फिस्कर्डो, सम्पूर्ण ग्रीसका धेरै सुन्दर गाउँहरूको लागि, र टापु सामान्यतया याथहरूको लागि सामान्य रोक्ने बिन्दु हो। तपाईंलाई फिल्म मनपर्‍यो कप्तान कोरेल्लीको मन्डोलिन? ठिक छ, यहाँ यो चित्रित थियो।
किथिरा यो धनी एथेन्सियनहरु संग धेरै लोकप्रिय छ। यो अवस्थित छ Peloponnese को दक्षिण र तपाईं त्यहाँ Piraeus (एथेन्स को बन्दरगाह) बाट, वा क्रेट बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उच्च मौसममा यो आवास पाउन गाह्रो छ, विशेष गरी अगस्टमा, तर यदि तपाइँ मौसमबाट बाहिर जानुहुन्छ भने यो एक उत्कृष्ट विकल्प हो। सामान्यतया रहन्छ पिटेको ट्र्याक बन्द एजेन्सीहरू द्वारा आयोजित ताकि तपाईं यो जान्न चाहानुहुन्छ तपाईं आफैले जानु पर्छ।
साथै यसको धेरै इतिहास छ किनकि यसको रणनीतिक समुद्री स्थानले व्यापारीहरू र विजेताहरूलाई यस मार्फत पार गरेको छ। त्यसो भए तपाईले १ XNUMX औं शताब्दीको बाइजान्टिन फ्रेस्को गुफामा देख्न सक्नुहुन्छ वा पहाडको माइनो मिनो सभ्यताबाट पीतलका मूर्तिहरू। इतिहास र समुद्री तटहरू, कस्तो राम्रो संयोजन!
Lefkada एक पुल द्वारा मुख्य भूमि संग जोडिएको छ त्यो एउटा नहर पार गर्दछ। यस टापुमा सब भन्दा टुरिस्टीक गाउँ नाइड्री हो र यहाँबाट तपाईं डु boat्गा लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई वरपरका टापुहरू प्रसिद्ध बनाउन जान्छ अरस्तु ओनासिस द्वारा स्कोर्पियो टापु। यदि तपाईंसँग रात छैन भने तपाईं टर्मिनल A मा दिनको तीन आवृत्तिहरूको साथ एथेन्समा बस लिन सक्नुहुनेछ। यसले करीव साढे पाँच घण्टा लिन्छ र दर around० यूरो जति छ।
लेफकाडासँग यसको समुद्री तटहरू छन् तर यसका वरिपरिका टापुहरू उत्तम छन्। उसको पक्षको लागि पाक्सोस कर्फुको छिमेकी हो तर पर्यटन भने कम छ। यो आफैमा वा गन्तव्य हुन सक्छ दिन यात्रा कर्फुबाट, जस्तो तपाईलाई मन पर्छ। यो एउटा सानो टापु हो, केवल १ kilometers किलोमिटर लामो, जसमा डु boat्गाबाट मात्र पुग्न सकिन्छ। यसको पुरानो भेनिस फोर्ट छ र यसको पूर्वी तटमा समुद्री तटहरू ढुb्गाले हानेर बनेका छन्, तर पूर्वी तटमा ती चलचित्रजस्तै छन्, त्यहाँ चट्टानहरू र गुफाहरू छन्, करीव चालीस, जुन डु boat्गामा मात्र पुग्न सकिन्छ।
र अन्तमा, एक टापु जसले छविहरूको विश्वलाई एक अविस्मरणीय छ: जाकिन्थोस। यसको समुद्री तटहरूमा एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त छ, कार्गो जहाजका बाँकी अंशहरू जुन अगाडि दौडँदै गर्दा सबैलाई चिन्तित पार्छ तर अन्ततः यस टापुलाई प्रख्यात बनाउँदै समाप्त भयो। यसमा हामी थप्न सक्दछौं कि अर्को तटमा क्यारेटा - क्यारेट्टा समुद्री कछुवाको संरक्षणको लागि एउटा परियोजना छ। यो जहाँ उनीहरूले आफ्नो अण्डा पार्छन् त्यसैले यो सुरक्षित क्षेत्र हो।
आयनियन सागर एक महान यात्रा गन्तव्य हो र यी यसको टापुहरू हुन्। तपाईं कुनलाई चिन्न रोज्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » ग्रीस » आयनियन सागर र यसका टापुहरू
इटालियन तटमा के हेर्ने
प्रमोदवन समुद्र को समुद्रहरु